Page-5 Ama-Full Carbon Fibub Tubes, iCarbon Fiber Tube, Umakhi weCarbon Ford Oval Tube eChina
Isikwele se-fiber carbon fiber esinobukhulu obungu-150mm
carbon fiber roll esongwe ishubhu Incazelo Yomkhiqizo I-Carbon fiber tube inokukhanya, amandla aphezulu, igqoke, futhi i-CTE ephansi kakhulu (ukuqina okwandisiwe kokushisa), ngaphezu kwalokho, i-carbon fiber ayikudlulisi ukushisa njengamasimbi...
I-Real 3K Carbon Fiber Tubes Round Incazelo Yomkhiqizo Amashubhu e-Carbon fiber ane- Round tube / Octagonal tube / Square tube hlobo, ikakhulukazi, ngoba i- Round tube / Octagonal tube iyathengiswa hot futhi inesitoko. Amashubhu e-Carbon fiber...
Yenza ngokwezifiso ubukhulu obukhulu be-3K twill carbon fiber tube Izici zeCarbon tube / ipayipi: 1.Introduction Lezi zi-3K Octagonal Carbon Fiber Tube zenziwe nge-carbon fiber emsulwa ngensimbi enhle noma i-weave ebonakalayo; Kutholakala ngemibala...
I-100% yekhabhoni eyindilinga eyenziwe nge-carbon fiber tube Izici zeCarbon tube / ipayipi: 1.Introduction Lezi zi-3K Octagonal Carbon Fiber Tube zenziwe nge-carbon fiber emsulwa ngensimbi enhle noma i-weave ebonakalayo; Kutholakala ngemibala...
Imibala Egcwele Ye-Carbon Fibound Round Tube ubude Incazelo Yomkhiqizo Uchungechunge lokusebenza okuhle kakhulu njengokuqina kobukhulu, ukuqhutshwa kukagesi, ukuqhutshwa kokushisa, ukuqina okuncane kokukhula okushisayo, Ukuzithobisa nokuzithambisa...
I-Wholesale Price Cross Woven Carbon Fiber Button Tube Incazelo Yomkhiqizo I-Carbon fiber tube inezinzuzo zamandla aphezulu, impilo ende, ukumelana nokugqwala, isisindo esincane nokuqina okuphansi. Kusetshenziswa kabanzi kuma-kites, izindiza...
I-Fibre Carbon Screw Tube Round Colored Light Pipe Incazelo Yomkhiqizo Izici ze-Carbon fiber tube 1. Amandla aphezulu ashubile: amandla e-carbon fiber ayizikhathi ezingama-6 kuya kwelezi zensimbi, angafinyelela ngaphezu kwe-3000mpa. 2. Ukuqina...
carbon fiber nxazonke ithuluzi lokushisa lokumelana ne-tube fiber Incazelo Yomkhiqizo Ngenqubo yokukhiqiza, amaphrofayli ahlukahlukene angakhiqizwa ngokusebenzisa isikhunta esihlukile ezifana: namaphayiphi we-carbon fiber nxazonke zezincazelo...
I-Hard Light Carbon Fiber Tube 3K Woven Pipe Incazelo Yomkhiqizo ICarbon fiber tube, eyaziwa nangokuthi yi-carbon fiber tube, eyaziwa nangokuthi i-carbon tube, i-carbon tube, yenziwe nge-carbon fiber composite material pre-impregnated...
I-3k 20x18x1000mm I-Carbon Fiber Tubes ephelele yamathoyizi we-RC Incazelo Yomkhiqizo I-Carbon Fiber Tubes ephelele (iCarbon Fibre Oval Tube) isetshenziswe kabanzi emikhakheni ye-hitech, efana nomshini wezindiza, imishini yokuthunga yesimanje,...
25x23X500mm Pure matte carbon fiber wagobhoza ama-boom I-Carbon fiber tube isetshenziswe kabanzi emasimini we-hitech, anjenge-aerospace, imishini yokuthunga yanamuhla, imboni yezolimo, imishini yezokwelapha, izimoto, imishini yokwakha, ukwakha,...
Amandla aphezulu amakhulu i-3K twill Carbon Fibre Boom Izici zeCarbon tube / ipayipi: 1.Introduction Lezi zi-3K Octagonal Carbon Fiber Tube zenziwe nge-carbon fiber emsulwa ngensimbi enhle noma i-weave ebonakalayo; Kutholakala ngemibala...
Amapayipi ahlukene we-Carbon Fibre Tubes Izici zeCarbon tube / ipayipi: 1.Introduction Lezi zi-3K Octagonal Carbon Fiber Tube zenziwe nge-carbon fiber emsulwa ngensimbi enhle noma i-weave ebonakalayo; Kutholakala ngemibala ehlukahlukene nosayizi...
Isikwele se-fiber carbon fiber esinobukhulu obungu-150mm Izici zeCarbon tube / ipayipi: 1.Introduction Lezi zi-3K Octagonal Carbon Fiber Tube zenziwe nge-carbon fiber emsulwa ngensimbi enhle noma i-weave ebonakalayo; Kutholakala ngemibala...
ngokwezifiso i-3k glossy twilly enkulu ye-carbon fiber tube Izici zeCarbon tube / ipayipi: 1.Introduction Lezi zi-3K Octagonal Carbon Fiber Tube zenziwe nge-carbon fiber emsulwa ngensimbi enhle noma i-weave ebonakalayo; Kutholakala ngemibala...
Imibala eyindilinga oyindilinga induku ikhabhoni fiber tube Izici zeCarbon tube / ipayipi: 1.Introduction Lezi zi-3K Octagonal Carbon Fiber Tube zenziwe nge-carbon fiber emsulwa ngensimbi enhle noma i-weave ebonakalayo; Kutholakala ngemibala...
Yenza ngokwezifiso i-3K ethafile noma ihlumela leCarbon Fiber Tube Izici zeCarbon tube / ipayipi: 1.Introduction Lezi zi-3K Octagonal Carbon Fiber Tube zenziwe nge-carbon fiber emsulwa ngensimbi enhle noma i-weave ebonakalayo; Kutholakala ngemibala...
I-3k Twill Glossy Round Tubing Carbon Fiber Tube Izici zeCarbon tube / ipayipi: 1.Introduction Lezi zi-3K Octagonal Carbon Fiber Tube zenziwe nge-carbon fiber emsulwa ngensimbi enhle noma i-weave ebonakalayo; Kutholakala ngemibala ehlukahlukene...
Amandla aphezulu i-3k twill matte carbon fiber tube Izici zeCarbon tube / ipayipi: 1.Introduction Lezi zi-3K Octagonal Carbon Fiber Tube zenziwe nge-carbon fiber emsulwa ngensimbi enhle noma i-weave ebonakalayo; Kutholakala ngemibala ehlukahlukene...
I-3K Roll Isongelwe I-100% Carbon Fiber Tube ene-Glossy Surface Izici ezigcwele zeCarbon tube / ipayipi: Lawa Khabhoni we-3K Carbon Fubes Carbon ayenziwe nge-carbon fiber emsulwa ngensimbi enhle noma i-weave ebonakalayo; Kutholakala ngemibala...